Israel oo Ilhaan Cumar u diiday inay dalkaas soo gasho, kahor inta aysan hadana ogolaan. - NorSom News
Israel oo Ilhaan Cumar u diiday inay dalkaas soo gasho, kahor inta aysan hadana ogolaan.
Xildhibaanada asalkeeda soomaalida yahay ee Ilhaan Cumar iyo Rashiida Daalib oo asal ahaan reer Falastiin ah, ayaa maalintii shaley aheyd loo diiday inay galaan gudaha Israel.
Ilhaan iyo Rashiida ayaa ka wada tirsan gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Mareykanka, waxeyna diidistooda keentay dood xoogan oo ku saabsan in Isreal aysan qadarin u xeynin xubnaha aqalka Mareykanka.
lhaan Cumar iyo Rashida Dhaalib ayaa lagu waday toddobadka soo socda inay booqasho ku tegaan dhulka la heysto ee Daanta Galbeed iyo bariga magaalada Qudus.
Ilhaan Cumar: Waa wax laga xumaado.
Israel ayaa ugu danbeyn Ilhaan iyo Rashiida u ogolaatay inay galaan gudaha Israel, kadib cadaadis ka yimid xubnaha aqalka baarlamaanka.
Previous articleNorway: Bixinta Kaararka aqoonsiga qaran oo mar kale dib u dhacay.
Next articleLabadii oday ee ka hortagay weerarkii masaajidka oo maamuus loo sameeyay.